कोरोनाका कारण विदेशमा पछिल्लो हप्ता १६ नेपालीको मृत्यु – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १६:३२ English
कोरोनाका कारण विदेशमा पछिल्लो हप्ता १६ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं, ५ साउन । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कारण विदेशमा एक हप्तामा थप १६ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आइतबार बिहान सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विभिन्न देशमा १६ जना नेपालीको ज्यान गएको हो । योसँगै विदेशमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने नेपालीहरुको संख्या दुई सय नाघेको छ ।
संघ मातहतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. संजीव सापकोटाका अनुसार पछिल्लो हप्ता कतारमा ८, कुवेतमा ३ र युएईमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । समितिका अनुसार २० देशमा रहेका नेपालीहरु पूर्णरुपमा कोरोना मुक्त भएका छन् । विदेशमा ३० हजार ५७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा २८ हजार ६८१ जना संक्रमण मुक्त भएको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ ।
एनआरएनए, नेपाल सरकार र कूटनीतिक निकायको पहलमा २५ मुलुकबाट २९ हजार ७८० जना नेपालीको उद्धार भएको छ ।
यस्तै मलेसिया, साउदी अबर, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशबाट १७२ वटा शव नेपाल ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ । विदेशमा विभिन्न कारण ज्यान गुमाएका ४३४ जनामध्ये १५६ शवको परिवारको सहमतिमा गन्तव्य मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ । विदेशबाट अझै १०७ वटा शव नेपाल ल्याउन बाँकी छ ।
५ श्रावण २०७७, सोमबार १२:५४ मा प्रकाशित